ကုမ္မဏီများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပရို မိုးရှင်းအပေါ်မှုတည်ပြီးSIMကပ် အလကားပေး နိုင်လောက်သည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းတန်ဖိုးတစ်ဖြေးဖြေး လျှော့ချရာတွင်“နိုင်ငံတကာမှလာရောက်ရင်းနှီးမည့်ကုမ္မဏီများ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုပရိုမိုးရှင်းအပေါ်မှုတည်ပြီးSIMကပ်အလကားပေး နိုင်လောက်သည့်အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်”ဟုမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမိုဘိုင်းဌာနမှအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဦးသိန်းဝင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင်ပြောသည်။
at 5/05/2012 09:41:00 PM No comments:
မန္တလေးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဦးဘသိန်း ရာပြည့် အမှတ်တရ အစီအစဉ်
at 5/05/2012 09:36:00 PM No comments:
at 5/05/2012 09:33:00 PM No comments:
မန္တလေးက ကျပ် ၁၀၀ တန် ဟန်းစက်
at 5/05/2012 09:25:00 PM No comments:
တောင်ဒဂုံ NLD သွေးအကူအညီပေးရေးနှင့် အတတ်သင်ကျောင်းတွင် စက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် ဆံပင်ညှပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
at 5/04/2012 04:47:00 PM No comments:
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း NLD ပါတီဝင်များတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်
at 5/04/2012 04:43:00 PM No comments:
NLD ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီမှအဖွဲ့ဝင်သစ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ညွန်ကြား
at 5/04/2012 04:38:00 PM No comments:
တောင်ဒဂုံ NLD ပါတီဝင် ဦးဝင်းကို၏ ပြောကြားချက်
at 5/04/2012 04:28:00 PM No comments:
at 5/04/2012 04:19:00 PM No comments:
at 5/04/2012 04:07:00 PM No comments:
at 5/04/2012 04:03:00 PM No comments:
at 5/04/2012 03:55:00 PM No comments:
at 5/04/2012 10:39:00 AM No comments:
at 5/04/2012 10:29:00 AM No comments:
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုဒီနှစ်ထဲမှာသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ရှိတယ်လို့AFPသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။
at 5/04/2012 08:27:00 AM No comments:
"ကျွန်မတို့လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်း တော်တော်များများကကိုယ်စားလှယ်တွေကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်။လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုဆိုပြီးတော့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်မှ ကောင်းတဲ့အလားအလာလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။"
at 5/04/2012 08:22:00 AM No comments:
အရှင်ဂမ္ဘီရဆေးကုခွင့်ငြင်းပယ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပေမဲ့ဆရာဝန်ကိုအပြစ်မတင်ကြောင်းမိခင်ဒေါ်ရေးကပြောပါတယ်။"မနေ့ကဆရာဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့တယ်။ တွေ့တော့ဦးဂမ္ဘီရတို့မင်းကိုနိုင်တို့စသဖြင့်နာမယ်ကြီးတွေတဲ့၊မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ကိုသွားကုပါတဲ့။အဲဒီလို ငြင်းလွှတ်လိုက်တယ်။ ရှောင်တာနေမှာပေါ့။ဆရာဝန်ကြီးလည်းအပြစ်မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်း ဖြစ်တာပေါ့။အဒေါ်ကပြောပါတယ်။သူကလူလည်းထွက်ပြီးပါပြီလို့။ဆရာပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေတိုက်တာသက်သာပါတယ်လို့။ဆရာဝန်က ပြောတာကမီဒီယာတွေက မေးရင် ဖြေရတာခက်တယ်တဲ့။မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ကုတော့ ဖြေရတာလွယ်တယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်မကုတော့ဘူးပေါ့။အဲလိုဘဲ ပြောလိုက်တယ်။
at 5/04/2012 08:18:00 AM No comments:
ခြေတစ်လှမ်း၊ သန်း(၆၀)နှင့် လွှတ်တော်နိဒါန်း
နံနက်၉နာရီ၇မိနစ်ခန့်တွင်လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးနှင့်မဏ္ဍိုင်ကြီး(၄)ရပ်စလုံးကကြိုဆိုနေသောခရမ်းရောင်ဝတ်စုံနှင့်ပခုံးထက်တွင်ဒေါင်းမြီးပုံပါခရမ်းနှင့်အဖြူစွက်ပိုးပ၀ါခြုံကာပန်းဖြူ နှစ်ပွင့်ပန်ထားသောသူမသည်အနက်ရောင်ကားလေးနှင့် ရောက်ရှိလာသည်။အညိုရောင်ကတ္တီပါပုံတော်ဖိနပ်ထူထူစီးကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်လှေကားဆီသို့လှမ်းတက်လာသောသူမ၏ခြေတစ်လှမ်းသည်သန်း(၆၀)သောပြည်သူများ၏အနာဂတ်အရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုတွင်ပါဝင်နေသည်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့်တကွအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ပြည်သူလူထုများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကလက်ခံထား သောအချက် ဖြစ်သည်။
at 5/04/2012 07:54:00 AM No comments:
ကဆုန်လပြည့်မှာ ကြုံရမယ့် Supermoon
မတ်လ ၁၉ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေ မြင်ခဲ့ရတဲ့ Supermoon
၂၀၁၂တနှစ်တာအတွက်ထူးခြားတဲ့Supermoon ဖြစ်စဉ်ကိုလာမယ့် မေလ၅ရက်၊ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ တွေ့ကြုံရမယ်လို့အာကာသ၊ကြယ်တာရာနဲ့နက္ခတ် လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။
at 5/04/2012 07:48:00 AM No comments:
တရားရေးမဏ္ဍိုင်မှန်ကန်ဖို့ Check and Balance လုပ်ကြစို့
အသွားမတော်တစ်လှမ်းလို့ဆိုရပါမယ်၊ ကော့သောင်းခမောက်ကြီးဆိပ်ဖူးကျေးရွာကဆိုင်ကယ်သမားလူငယ်တစ်ဦးဟာဆိပ်ဖူးကနေ အေးချမ်းသာကျေးရွာကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားပါတယ်။
at 5/04/2012 07:38:00 AM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ အစ်ကိုဦးနေအောင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်မှာ အဖွဲ့ ချုပ်ဆိုင်းဘုတ်တင်
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၂၆ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြိုနယ်ဖုန်းတော်ပြည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေအဖွဲ့ ချုပ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲနှင့်ရုံးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
at 5/03/2012 02:04:00 PM No comments:
နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၁၈လကမှနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်မြောက်လာပြီးဒီကနေ့မှာတော့သူမနဲ့အတူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတခြားအဖွဲ့ဝင်အများအပြားတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ထဲမှာသူတို့ရဲ့နေရာသစ်တွေကိုရယူလိုက်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမရဲ့ပါတီဝင်တွေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာမှာတခန်းတကဏ္ဍကပါဝင်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 5/03/2012 01:20:00 PM No comments:
သံရုံးအချို့ နေပြည်တော် ပြောင်းမည်
ရန်ကုန်၊မေ၂မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဟောင်းရန်ကုန်မြို့တော်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောသံလွင်လမ်းပေါ်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံရုံးနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံတမန်ရေးရာညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးရုံးအပါဝင်သံရုံးအချို့သည်မကြာမီ နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံရုံးမှဒုတိယအတွင်းဝန်က မေလ၂ရက်နေ့တွင်TheVoiceWeeklyသို့ ပြောကြားသည်။
at 5/03/2012 01:17:00 PM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းခရီးစဉ်အတွက်၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဟာရှမ်းပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိ နေကြပါတယ်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်က ဒေသခံမျိုးဆက်သစ်ပအို့ဝ်လူငယ် ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကျောင်းသားသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိမှတ်စရာတွေ၊ပညာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
at 5/03/2012 01:07:00 PM No comments:
စုရင်ခွင်က ပညာ့ အလင်းရောင်
at 5/03/2012 01:05:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လွှတ်တော် ၀တ်စုံ
at 5/03/2012 01:01:00 PM No comments:
ဒီနံပါတ်ကို ထီထိုးသူတွေက ဘယ်လို သွားယူကြသလဲ။
လွယ်ပါတယ်၊ တောက်တဲ့ လက်အုပ်ချီတဲ့အိမ် ဘယ်အိမ်လဲ၊ အဲဒီအိမ်နံပါတ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ထီသွားထိုးလိုက်တာပါပဲ တဲ့။
at 5/01/2012 07:56:00 PM No comments:
အစိုးရ နဲ့ NLD ကို ဘန်ကီမွန်း ချီးကျူး
မြန်မာပြည်ရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက မြန်မာပြည်ကိုတကြိမ်ထက်မက ရောက်ဖူးပေမယ့် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာအရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီတခေါက်ခရီးစဉ်မှပဲ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တာပါ။
at 5/01/2012 07:54:00 PM No comments:
ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အဓိကအပြောင်းအလဲအဖြစ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်း၃၁ နှစ်အတွင်း ပြန်ပြီးစီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့အကြားရခဲ့တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗွီအိုအေသတင်းထောက်ဒယ်နီရယ်ဘန်စတိန်း(DanielleBernstein)သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်။
at 5/01/2012 07:50:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းသည် မေလ၁ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
at 5/01/2012 07:48:00 PM No comments:
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသဘောထားတင်းမာသူ၊စေ့စပ်ညှိနှိုင်းလို့မရအောင်ခေါင်းမာသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြတာကတော့နံပတ်တစ်အချက်ပါပဲ။သူဟာအမျုိးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုင်စွဲထားတဲ့မူတွေကအစ ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်။သင့်တင့် လျှောက်ပတ်တဲ့အဖြေကိုထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
at 5/01/2012 07:45:00 PM No comments:
သမဂ္ဂ အစား အဖွဲ့ လို့သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်ရန် အသင်းအဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ထံ အသိပေးအကြောင်းကြား
(NLD) ပါတီက ဦးသိန်းမောင် ပြောကြားသည်မှာ သမဂ္ဂ အစား အဖွဲ့ ဟုသာ သုံးစွဲရန်အတွက် အသင်းအဖွဲ့(၈)ဖွဲ့ဆီကို အသိပေး အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက အသင်းအဖွဲ့များ
at 4/30/2012 02:35:00 PM No comments:
မြောက်ဒဂုံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးလှမင်း ပြောကြားသည်မှာ NLD ရှေ့နေကွန်ယက် ခါင်းဆောင် ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ရှိန်းတို့ ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဒီမိုကရေစီရေး
at 4/30/2012 02:33:00 PM No comments:
﻿ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန် တတိယအကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဧပြီလ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာ
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွန်းအားပေးရန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်သည်တတိယအကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ဧပြီလ၂၉ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
at 4/30/2012 10:26:00 AM No comments:
(၃၃)အဆန်အိပ်စင်ရထားသည်နန့်စီးအောင်ဘူတာမှ(၂၉.၄.၂၀၁၂)နံနက်(၀၀း၅၆)နာရီအချိန်တွင်ထွက်လာပြီးနံနက်(၁း၁၀)နာရီအချိန်ကချင်ပြည်နယ်မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ မော်ဟန်ဘူတာနှင့်နန့်စီးအောင်ဘူတာအကြားမိုင်တိုင်၆၁၆/၁ နှင့်၆၁၆/၃အကြားတံတားအမှတ်(၅၃၄) နေရာတွင်မိုင်း(၂)လုံးဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
at 4/30/2012 10:20:00 AM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမီတာဖတ်ဝန်ထမ်း၇၅ဦးကိုရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ကမကြာသေးမီရက်ပိုင်းတွင်တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ယင်းသို့တာဝန်မှရပ်စဲခံရသည့်၇၅ဦးတွင်၄၄ဦးမှာအမြဲတန်းဝန်ထမ်း ဖြစ်ပြီး၃၁ဦးမှာ နေ့စားဝန်ထမ်းများဖြစ်ကာယင်းတို့ကိုမီတာကောက်ခံရာတွင် ငွေပိုကောက်ခံခြင်းများပြုလုပ်သည်ဟုဆိုကာယခုကဲ့သို့တာဝန်မှရပ်စဲရခြင်းဖြစ်သည်ဟုရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှသိရသည်။
at 4/30/2012 10:15:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျာမဏီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးGuidoWesterwelleကဂျာမဏီနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာ့ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကိုအားပေးထောက်ခံသွားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံစဉ်ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ နောက် ကြောင်းပြန်လှည့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ပြောလို့မရနိုင်သေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
at 4/30/2012 10:02:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာတဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးGuidoWesterwelleဟာNLDပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးEUဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ရပ်တည်ချက်၊သဘောထားတွေကို ဆွေးနွေးကြောင်းသိရပါတယ်။
ထားဝယ်ခရိုင် လောင်းလုံမြို့နယ် ဝေဒီကျေးရွာတွင်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသည့် နောက်ပိုင်း ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးကအန်အယ်လ်ဒီပါဝင်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါတီကိုမဲထည့်ခဲ့သူများအားခွဲခြားဖိနှိပ်မှူများ ပြုလုပ်လာခဲ့ကြောင်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူနှင့် ကျေးရွာသားများက ပြောကြားသည်။
at 4/30/2012 09:56:00 AM No comments:
ရန်ကုန်ရောက် EU အကြီးအကဲ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာအကြီးအကဲ Catherine Ashton, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံများ - ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မှာ EU ရုံး ဖွင့်ပါပြီ။
ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံး ဖွင့်ပွဲကို စနေနေ့က လုပ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံမှာ ပါဝင်သူများ ရုံးကို ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
at 4/30/2012 09:30:00 AM No comments:
ရန်ကုန်မှာ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်တော့မယ်
at 4/30/2012 09:28:00 AM No comments:
ပြတိုက်ဖြစ်တော့မယ့် သမိုင်းဝင် ၀န်ကြီးများရုံး
ရန်ကုန်က ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးများထဲက၀န်ကြီးများရုံးကို ပြတိုက်လုပ်ရန်အတွက် ပြုပြင်ထိမ်းသိန်းမွမ်းမံ ပြင်ဆင်ဘို့ ဒေါ်လဲ့ရည်စိုးနဲ့အဖွဲ့ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲမှာ ထိုကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးစိုးသိန်း ကပြောပါတယ်။
at 4/30/2012 09:26:00 AM No comments:
ဒီနေ့ညပွဲ။လူရွှင်တော်ဇာဂနာ၊မေတ္တာ၊အရိုင်း၊ကင်းကောင်၊ငှက်ပျောကြော်၊ ဗေဒါ။မင်းသမီး ချောအိငြိမ်းနဲ့အရိုင်းရဲ့သမီးလေးပန်းနု။
at 4/30/2012 09:25:00 AM No comments:
at 4/29/2012 09:14:00 PM No comments:
NLD ပါတီဥက္ကဌဒေါ်စုကြည်နှင့် အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး MR. Giuliomaria TERZIDISANT AGATA ကို တွေ့ဆုံ
ဧပြီလ၂၆ရက်နေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိပ်မှာအီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးMR.GiuliomariaTERZIDISANT AGATAရောက်ရှိလာပြီးဒေါ်စုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင်MR. Giuliomaria TERZIDISANT AGATAက မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခြင်းမှာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊နေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်သမ္မတ၏နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ချက်များကိုသဘောကျကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊
မြန်မာ-အီတလီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ခိုင်မာစေရး၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများ၊မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဥရာပသမဂ္ဂအကြားရင်းနှီမြုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ အီတလီနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နည်းပညာပိုင်းနှင့်အခြားအကူအညီများပံ့ပိုးပေးရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ထို့ပြင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေး၊တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
MR. Giuliomaria TERZIDISANT AGATAကဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးအရ အရေးယူပိတ်ဆို့ထားမှုတစ်နှစ်ရပ်ဆိုင်းထားမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပြီမှဆောင်ရွက်သွားမည်အကြောင်း၊အီတလီနိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ဆောင်ရွက်ထားမှုအပေါ်ထောက်ခံကြောင်း၊ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်NLDပါတီအနေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကိုလည်းဂုဏ်ယူမိပေမယ့်NLDလွတ်တော်ကိုယ်စားလှများလွှတ်တော်သို့မတတ်ရောက်တဲ့အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိလိုတယ်လိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
နေ့လည်ပိုင်းမှာဒေါ်စုကြည်နှင့်MR. Giuliomaria TERZIDISANT AGATAတို့မှ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းထောက်၃၀ ဦးခန့်နှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်စုကြည်ကလွှတ်တော်သို့မတတ်ရောက်ရခြင်းမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ရပ်လိုမထင်ကြောင်း၊နည်းပညာစနစ်ပိုင်းများ(မီဒီယာများ)မှားယွင်းမှုတယ်လို့သားမှတ်ယူလိုပြီးလွှတ်တောမတက်သည့်ပြဿနာအားNLDပါတီနှင့်ပြည်သူမှအကျယ်ချဲ့မည်ကိုစိုးရိမ်မိကြောင်း၊မိမိအနေဖြင့်အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်ကြောင်း၊သမ္မတအနေဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးNLDအနေဖြင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုလွှတ်တော်တွင်နိုင်ငံရေးလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိပြီးလွှတ်တော်သို့မတတ်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊မတတ်ရောက်သေးခြင်းသာဖြစ်သည်လိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါသည်။
MR. Giuliomaria TERZIDISANT AGATAကမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း
at 4/29/2012 01:53:00 AM No comments:
ကုမ္မဏီများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပရို မိုးရှင်းအပေါ်မှုတည်ြ...
တောင်ဒဂုံ NLD သွေးအကူအညီပေးရေးနှင့် အတတ်သင်ကျောင်း...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း NLD ပါတီဝင်များတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံကို ဒီနှစ်ထဲ သွားရေ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ အစ်ကိုဦးနေအောင် နေထိုင်ခဲ...
ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်သစ်များ အမေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လွှတ်တော် ၀...
နှစ် ၃၀ အတွင်း မြန်မာ သန်းခေါင်စာရင်း ကုလအကူအညီ ဖြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကုလသမဂ္ဂသို့ လာရောက်ရန် ဘန်ကီ...
သမဂ္ဂ အစား အဖွဲ့ လို့သုံးစွဲခေါ်ဝေါ်ရန် အသင်းအဖွဲ့(၈)...
﻿ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေး ပြုပြင်ြေ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ မီတာဖတ်ဝန်ထမ်း ၇၅ ဦ...
NLD ပါတီဥက္ကဌဒေါ်စုကြည်နှင့် အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ြ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းအချို့နှင့် အီတလီနိုင်င...
NLD ပါတီနာယကအဖွဲ့ဝင် ဦးတင်ဦးမှ ကရင်ပြည်နယ်သို့သွ...